FXCC ပေါ်လစီ | ဘယ်လိုကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းစေခြင်းငှါသတင်းအချက်အလက်ကိုသုံးပါ
ပင်မစာမျက်နှာ / ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ
2 ။ မူပိုင်ခွင့်မူဝါဒ UPDATE
3 ။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းခြင်း
4 ။ သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များလုပ်ထားတဲ့ကိုအသုံးပြုသည်
1 ။ စာချုပ်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်
2 ။ တရားဝင်တာဝန်နှင့်အတူလေးစားလိုက်နာခြင်း
3 ။ တရားဝင်အကျိုးစီးပွားကာကွယ်စောင့်ရှောက်၏ရည်ရွယ်ချက်
4 ။ ပြည်တွင်းရေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက်များနှင့်စံချိန်စောင့်ရှောက်မှုအတွက်
5 ။ ဥပဒေရေးရာဆိုင်ရာအသိပေးချက်များအဘို့
6 ။ Marketing ကိုရည်ရွယ်ချက်
7 ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများတိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးဖို့
5 ။ သင့်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များဖော်ထုတ်ခြင်း
6 ။ အချက်အလက်လုပ်ငန်းစဉ်သဘောတူညီခကျြ
7 ။ အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒေတာ
8 ။ သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များနှင့်ပတ်သတ်သောသင့်အခွင့်အရေးများ
9 ။ NO ခတှယျလိုအပ်သော
10 ။ တုံ့ပြန်ရန်မှာ TIME သည် LIMIT
11 ။ WE သင်၏အချက်အလက်များကိုကာကွယ်ပုံ
12 ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ cookies မူဝါဒ
FXCC မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုင်းရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုထိန်းသိမ်းခြင်း၏အရေးပါမှုကိုနားလည်လာနှင့်ဤ website ကိုတဆင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များကထောက်ပံ့ပေးမဆိုသတင်းအချက်အလက်လုံခြုံရေးသေချာဆီသို့ဦးတည်ကာကျူးလွန်ဖြစ်ကြသည်။
2. မူပိုင်ခွင့်မူဝါဒ UPDATE
ထိထိရောက်ရောက်နှင့်တိကျစွာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ဘဏ္ဍာရေးထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများပေးစေရန်အတွက်, သင်တို့သည်ငါတို့၏န်ဆောင်မှုများတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောသုံးစွဲဖို့မှတ်ပုံတင်ရန်လျှောက်ထားသောအခါကြှနျုပျတို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုအဘို့အသင်မေးပါလိမ့်မယ်။ FXCC ရံဖန်ရံခါပေး updated ဒေတာအတွက်ဒါမှမဟုတ်ဖျောပွ၏တိကျမှန်ကန်မှု၏အတည်ပြုချက်အဘို့အသငျသညျတောငျးဆိုခွငျးအားဖွငျ့ databases ကိုကျင်းပခဲ့သောအချက်အလက်များ၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုစစ်ဆေးရန်, လက်ျာနှင့်ဖျော်ဖြေစီးပွားရေးလုပ်ဆောင်မှုများ၏သီလအားဖြင့်တာဝန်ရရှိထားသူဖြစ်ပါသည်။
ကျနော်တို့စုဆောင်းစေခြင်းငှါပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်အမျိုးအစားပါဝင်သည် (သို့သော်ကန့်သတ်သည်မဟုတ်) နိုင်သည်
မိုဘိုင်း / တယ်လီဖုန်းနံပါတ်။
နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အရေအတွက်က / သို့မဟုတ် ID နံပါတ်ကို။
အစိုးရလက်မှတ်နှင့်အတူဓာတ်ပုံကို ID ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
အခွန်အတည်တကျနေထိုင်ရာမြို့ရွာနှင့်အခွန် ID ကိုနံပါတ်။
ဘဏ္ဍာရေးမှာ Data [ဘဏ်အကောင့်များနှင့်ငွေပေးချေကတ်ကိုအသေးစိတျ] ပါဝင်သည်။
ငွေသွင်းငွေထုတ်မှာ Data [ဖို့နဲ့သင့်ထံမှငွေပေးချေမှုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို] ပါဝင်သည်။
နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာမှာ Data သင်ဤ website ကိုဝင်ရောက်ဖို့အသုံးပြုကိရိယာများပေါ်တွင် [အင်တာနက်ပရိုတိုကော (IP) လိပ်စာ, သင့်ရဲ့ login ဒေတာ, browser ကိုအမျိုးအစားနှင့်ဗားရှင်း, အချိန်ဇုန် setting ကိုနှင့်တည်နေရာ, browser ကို plug-in ကိုအမျိုးအစားများနှင့်ဗားရှင်း, operating system နဲ့ပလက်ဖောင်းများနှင့်အခြားနည်းပညာလည်းပါဝင်သည် ] ။
ဒေတာများ [သင်၏အသုံးပြုသူအမည်နှင့်စကားဝှက်ကိုသင်ဖွငျ့ဝယ်ယူမှုသို့မဟုတ်အမိန့်, သင့်အကျိုးစီးပွား, ဦးစားပေး, တုံ့ပြန်ချက်များနှင့်စစ်တမ်းတုံ့ပြန်မှု] ပါဝင်သည်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်။
အသုံးပြုမှုမှာ Data [သငျသညျကြှနျုပျတို့၏ website, ထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုနိုင်သည်ဘယ်လိုအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်] ပါဝင်သည်။
စျေးကွက်များနှင့်ဆက်သွယ်ရေးမှာ Data [ကျွန်တော်တို့ကိုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တတိယပါတီများအနေဖြင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလက်ခံရရှိ၌သင်တို့၏ဦးစားပေးနှင့်သင့်ဆက်သွယ်ရေးဦးစားပေး] ပါဝင်သည်။
ငါတို့သည်လည်းဤကဲ့သို့သောမည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်စာရင်းအင်းသို့မဟုတ်လူဦးရေဒေတာအဖြစ် Aggregators ဒေတာများ, စုဆောင်းအသုံးပြုမျှဝေပါ။ စုစည်းဖို့ဒေတာကိုသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေး data ကိုမှဆင်းသက်လာမည်အကြောင်း, ဒါပေမဲ့ဒီဒေတာကိုတိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်သွယ်ဝိုက်သင့်ရဲ့အထောက်အထားကိုထုတ်ဖေါ်မပညတ်တရားတော်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး data တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိပါ။ ဥပမာအားဖြင့်, ကျွန်တော်တစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်က်ဘ်ဆိုဒ်ရဲ့ feature ကိုရယူသုံးအသုံးပြုသူရာခိုင်နှုန်းတွက်ချက်ရန်သင့်အသုံးပြုမှုဒေတာများကိုစုစည်းစေနိုင်သည်။ ကျနော်တို့ပေါင်းစပ်သို့မဟုတ်ပါကတိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်သွယ်ဝိုက်သငျသညျကိုဖေါ်ထုတ်နိုင်အောင်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒေတာနှင့်အတူစုစုပေါင်းဒေတာများကိုချိတ်ဆက်မယ်ဆိုရင်သို့သော်ကျနော်တို့ကဒီ privacy ကိုအသိပေးစာနှင့်အတူညီကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်ဖြစ်သောပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒေတာအဖြစ်ပေါင်းစပ် data တွေကိုဆက်ဆံပါ။
ငါတို့သည်သင်တို့နှင့် ပတ်သက်. ကိုယ်ပိုင်ဒေတာများကိုမဆိုအထူးအုပ်စုများစုဆောင်းကြပါဘူး (ဒီသင်၏အပြေးပြိုင်ပွဲသို့မဟုတ်လူမျိုးစုအကြောင်းအသေးစိတ်, ဘာသာရေးသို့မဟုတ်အတွေးအခေါ်ယုံကြည်ချက်, လိင်ဘဝ, လိင်, နိုင်ငံရေးထင်မြင်ချက်များ, ကုန်သွယ်ရေးသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်, သင့်ကျန်းမာရေးနှင့်မျိုးရိုးဗီဇနှင့် biometric ဒေတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်များပါဝင်သည်) ။
ငါတို့သည်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့န်ဆောင်မှုများသင့်ရဲ့အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. အချို့သောသတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းလိမ့်မည်။ ဤသည်သင်နှင့် / သို့မဟုတ်သင့်ကုမ္ပဏီတွေဖြစ်တဲ့သင်တို့အပေါ်မှာ log အချိန်ကာလအဖြစ်ဖော်ထုတ်နိုင်သည့်အနေဖြင့်သတင်းအချက်အလက်, အန်ဆောင်မှုများအသုံးပြုမှုကိုသင့်ရဲ့အသံအတိုးအကျယ်ကိုသင်ရယူဒေတာ, စနစ်များနှင့်အစီရင်ခံစာများအမျိုးအစားများ, သင်တို့အပေါ်မှာ log ရာကနေတည်နေရာ, ပါဝင်နိုင်ပါသည် အစည်းအဝေးများနှင့်အခြားအလားတူအချက်အလက်များ၏ကြာချိန်။ စုဆောင်းထားသောသတင်းအချက်အလက်များကိုလည်းတရားထိုကဲ့သို့သောအများပြည်သူအာဏာပိုင်များ, FXCC ရန်သင့်အားမိတ်ဆက်ကြပြီကုမ္ပဏီများ, ကဒ်အပြောင်းအလဲနဲ့ကုမ္ပဏီများ, ငါတို့ကဲ့သို့တရားကို process မှခွင့်ပြုဖြစ်ကြောင်းလူသိရှင်ကြားမရရှိနိုင်သတင်းရင်းမြစ်အဖြစ်တတိယပါတီများမှထံမှရရှိသောနိုင်ပါသည်။
ကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူသင့်ရဲ့အီလက်ထရောနစ်နှင့် / သို့မဟုတ်တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေးမှတ်တမ်းတင်ထားသောကြောင့် FXCC ၏တစ်ဦးတည်းသောပိုင်ဆိုင်မှုသည်နှင့်ငါတို့စပ်ကြားဆက်သွယ်ရေး၏သက်သေပါဝငျဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျလိုအပ်သောပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်မဆိုသို့မဟုတ်အားလုံးကိုထောက်ပံ့ဖို့ရှေးခယျြမှုရှိသည်။ သို့သော်သတင်းအချက်အလက်များပျောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖွင့်လှစ်သို့မဟုတ်ထိန်းသိမ်းရန်သင့်အကောင့်နှင့် / သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများအားဖြင့်သင်တို့ကိုပေးနိုင်ခြင်းဖြစ်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ထုတ်ကုန်နှင့်တကွသင်ပေး, ငါတို့ clients များနှင့်အတူတစ်ဦးသဘောတူထားသောကြားဆက်ဆံရေးထဲသို့မဝင်ရနိုင်ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ခံမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြည့်စွက်နိုင်ပါလိမ့်သကဲ့သို့ငါတို့သည်သင်တို့၏ data တွေကိုစီမံပါမည်။ On-ဘော်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ client ကိုဖြည့်စွက်နိုင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်စည်းမျဉ်းတာဝန်ဝတ္တရားနှုန်းအတိုင်းဖောက်သည်ကြောင့်လုံ့လဝီရိယလုပ်ဆောင်သင့်ရဲ့အထောက်အထားကို verify ဖို့လိုအပ်ပါတယ်, ကြှနျုပျတို့ကိုထိရောက်စွာ FXCC နှင့်သင်၏ကုန်သွယ်အကောင့်ကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့ဝယ်ယူအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသုံးစွဲဖို့လိုပါတယ်။
ဥပဒေရေးရာတာဝန်ဝတ္တရား၏တစ်ဦးကအရေအတွက်အားပေးသောကျနော်တို့ဘာသာရပ်များမှာသက်ဆိုင်ရာဥပဒေများအဖြစ်ပြဌာန်းလိုအပ်ချက်များ, ဥပမာ Anti-ငွေကြေးခဝါချမှုဥပဒေများ, ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုဥပဒေများ, ကော်ပိုရေးရှင်းဥပဒေများ, privacy ကိုဥပဒေများနှင့်အခွန်ဥပဒေများဖြင့်ချမှတ်ထားပါသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, တရားရုံးအမိန့်နှင့်အတူခရက်ဒစ်ကဒ်စစ်ဆေးမှုများ, ငွေပေးချေမှုအပြောင်းအလဲနဲ့, ဝိသေသလက္ခဏာစိစစ်အတည်ပြုခြင်းနှင့်လိုက်နာမှုများအတွက်လိုအပ်သောပုဂ္ဂိုလ်ရေး data တွေကိုအပြောင်းအလဲနဲ့လှုပ်ရှားမှုများစည်းကြပ်ထားတဲ့အဘယ်သူ၏ဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းများကိုကျွန်တော်တို့ကိုလျှောက်ထားအမျိုးမျိုးသောကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များ, ရှိပါတယ်။
ငါတို့အားဖြင့်သို့မဟုတ်ငါတို့သည်သင်တို့၏သတင်းအချက်အလက်သုံးစွဲဖို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုသို့မဟုတ်စီးပွားဖြစ်အကြောင်းပြချက်ရှိသည့်အခါတရားဝင်အကျိုးစီးပွားရှိရာတတိယပါတီကလိုက်တရားဝင်အကျိုးစီးပွားကာကွယ်စောင့်ရှောက်သကဲ့သို့ FXCC ပုဂ္ဂိုလ်ရေး data တွေကို process လုပ်တယ်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ကသင်တို့တဘက်၌မတရားသွားနှင့်သင်တို့အဘို့အကောင်းဆုံးအရာဖြစ်တယ်မပြုရပါ။ ထိုကဲ့သို့သောအပြောင်းအလဲနဲ့လှုပ်ရှားမှုများဥပမာပါဝင်သည်:
ကျနော်တို့အလားအလာရာဇဝတ်မှု, ပိုင်ဆိုင်မှုလုံခြုံရေး, ဝင်ရောက်ခြင်းထိန်းချုပ်မှုနဲ့ anti-ပိုင်နက်ကျူးလွန်မှုအစီအမံတားဆီး, ကုမ္ပဏီ၏အိုင်တီနှင့်စနစ်လုံခြုံရေးပေးဆောင်ရွက်ရန်နည်းလမ်းနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များ,
ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တရားဝင်အကျိုးစီးပွားအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့၏တရားဝင်တာဝန်ဝတ္တရားနှင့်အတူလိုက်နာနိုင်ရန်အတွက်လိုအပ်သောပြည်တွင်းရေးစီးပွားရေးနှင့်စံချိန်စောင့်ရှောက်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ, process ရန်လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ ငါတို့သည်လည်းသင်နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာအုပ်ချုပ်သဘောတူညီချက်အညီသင့်ရဲ့စာချုပ်တာဝန်ဝတ္တရားနှင့်အတူလိုက်နာကြောင်းသေချာစေရန်အလို့ငှာမှတ်တမ်းများစောင့်ရှောက်မည်။
ရံဖန်ရံခါ, ပညတ္တိကျမ်းထုတ်ကုန်များနှင့် / သို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုသို့မဟုတ်ဥပဒေများမှအချို့သောအပြောင်းအလဲများကိုသင်အကြံပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုလိုအပ်ပါတယ်။ ငါတို့သည်သင်ဥပဒေရေးရာဆိုင်ရာအသိပေးချက်များပို့ပေးရန်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်ကို process ဖို့တာဝန်ရှိကြောင်းပါလိမ့်မည်, ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ပတ်သက်သောပြောင်းလဲမှုများသင်အကြောင်းကြားဖို့လိုအပ်လိမ့်မည်။ သင်ကျွန်ုပ်တို့ထံမှတိုက်ရိုက်စျေးကွက်သတင်းအချက်အလက်ခံယူဖို့မရွေးချယ်လျှင်ပင်ဤအချက်အလက်လက်ခံရရှိရန်ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။
6. Marketing ကိုရည်ရွယ်ချက်
ကျနော်တို့သုတေသနနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သင့်ရဲ့ဒေတာကိုသုံးပါ, သင်၏ကုန်သွယ်သမိုင်းမဆိုဆန်းစစ်ကယ်နှုတ်တော်မူနိုင်ရန်အတွက်, အစီရင်ခံစာများ, သင့်မှတ်ပုံတင်အီးမေးလ်လိပ်စာရန်သင့်အားစိတ်ဝင်စားစေခြင်းငှါစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးနိုငျသညျ။ သင်အမြဲသင်သည်မည်သည့်ရှည်ထိုကဲ့သို့သောဆက်သွယ်ရေးလက်ခံရရှိရန်ဆန္ဒရှိမအမှု၌သင်၏အ option ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်သတိပြုပါ။
သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုဤနည်းဖြင့်သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များအသုံးပြုချင်ကြဘူးဆိုလျှင်, မဆိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းခံရဖို့မတောငျးဆို support@fxcc.com အီးမေးလ်ပေးပို့ပါ။ သင်တစ်ဦးအပေါ်-line ကိုစာရင်းပေးသွင်းထားသူမှန်လျှင်, သင်သည်သင်၏မှ login စေခြင်းငှါ ကုန်သည် Hub အသုံးပြုသူပရိုဖိုင် နှင့်မည်သည့်အချိန်ကသင့်ရဲ့အကြောင်းကြားစာကိုဦးစားပေးပြင်ဆင်။
ကျနော်တို့အဘို့သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကျွန်တော်တို့ကိုသင့်ရဲ့ဘဏ္ဍာရေးရည်ရွယ်ချက်များနားလည် enable နှင့်သက်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများကိုသင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုသင့်လျော်ဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ပြင်ဤအချက်အလက်အရည်အသွေးကိုန်ဆောင်မှုများကို FXCC ကူညီပေးသည်။ အကြှနျုပျတို့သညျအခြိနျ မှစ. အကြှနျုပျတို့သညျမှအသုံးဝင်ပါလိမ့်မည်ထင်သောအခြိနျကာလမှ (SMS သို့မဟုတ်အီးမေးလ်ဆက်သွယ်ရေးကိုသင်ကြည့်ရှုဖို့အဘို့, margin ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုသို့မဟုတ်အခြားသတင်းအချက်အလက်ကန့်သတ်ထားအပါအဝင်ပေမယ့်မဟုတ်) စျေးကွက်ပစ္စည်းပေးပို့စေခြင်းငှါနေစဉ်, ကျနော်တို့လေးစားရန်လိုအပ်ကြောင်းမသိ သင့်ရဲ့ privacy ကို။ သငျသညျမဟုတ်ရင်အကြောင်းကြားလျှင်, ငါတို့သည်ကိုင်ထားသည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုတည်ထောင်ခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲသင့်အကောင့်, သင့်ဖြစ်ပွားနေသောလိုအပ်ချက်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်, ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ထုတ်ကုန်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်သင်ကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောသတင်းအချက်အလက်သို့မဟုတ်ငါတို့သည်သင်တို့မှသက်ဆိုင်ရာဖြစ်နိုင်သည်ယုံကြည်ကြောင်းအခွင့်အလမ်းများပေးခြင်းများအတွက်အသုံးပြုသည်။
FXCC အထိခိုက်မခံတဲ့အချက်အလက်တွေအပေါ်ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုသက်ဆိုင်ရာများနှင့်အထူးသဖြင့်ကန့်သတ်ပေါ် မူတည်. သို့သော်သင့်ရဲ့ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုထုတ်ဖော်မည်မဟုတ်, ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကိုထုတ်ဖော်စေခြင်းငှါဆိုလိုတယ်:
ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့်အထူးကုအကြံပေးအုပ်ချုပ်ရေး, ဘဏ္ဍာရေး, အာမခံ, သုတေသနသို့မဟုတ်အခြားဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုပေးကန်ထရိုက်ခဲ့ကြသူ FXCC ရန်။
ကျနော်တို့ (ဥရောပစီးပွားရေးဧရိယာအတွင်းသို့မဟုတ်ပြင်ပမှာဖြစ်စေခြင်းငှါမဆိုအဘယ်သူကို၏) တစ်ဦးနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိတော်မူသောအတူပွဲစားများသို့မဟုတ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များမိတ်ဆက်ခြင်း
အကြွေးပေးသူ, တရားရုံးများ, ခုံရုံးနှင့်စည်းမျဉ်းအာဏာပိုင်များပညတ်တရားအားဖြင့်သဘောတူညီခဲ့သို့မဟုတ်အခွင့်အာဏာအဖြစ်
credit အစီရင်ခံသို့မဟုတ်ရည်ညွှန်းအေဂျင်စီများ, တတိယ authentication ကိုဝန်ဆောင်မှုပေး, လိမ်လည်မှုကြိုတင်ကာကွယ်ရေး, Anti-ငွေကြေးခဝါချမှုရည်ရွယ်ချက်များ, မှတ်ပုံတင်ဒါမှမဟုတ် client ကို၏ကြောင့်လုံ့လဝီရိယစစ်ဆေးမှုများ
ကုမ္ပဏီတစ်ခု Affiliate ဒါမှမဟုတ်ကုမ္ပဏီ၏တူညီသောအုပ်စုတွင်အခြားမည်သည့်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။
အမှု၌ထိုကဲ့သို့သောထုတ်ဖော်ဥပဒေသို့မဟုတ်မည်သည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအခွင့်အာဏာများကလုပ်ခံရဖို့လိုအပ်ပါသည်, က FXCC, မည်သည့်ဥပဒေရေးရာတာဝန်ဝတ္တရားတွေနဲ့လိုက်လျောအလားအလာလိမ်လည်မှုကနေသူ့ဟာသူကာကွယ်ဖို့အတွက်နှင့် service provider ကသဘောတူညီချက်များဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့အဘို့အလို့ငှာဖန်ဆင်းပါလိမ့်မည်။ အမှု၌ထိုကဲ့သို့သောထုတ်ဖော်မဟုတ်ရင်အဆိုပါစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအခွင့်အာဏာများကညွှန်ကြားထားမဟုတ်လျှင်သူကတစ်ဦး '' လိုအပ်-to-သိ '' အခြေခံပေါ်မှာလုပ်ပါလိမ့်မည်လိုအပ်ပါသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ကျနော်တို့ FXCC မှဝန်ဆောင်မှုပေးအဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုကိုင်တွယ်သို့မဟုတ်ရယူသူကို FXCC အောက်မှာအဖွဲ့အစည်းများမဟုတ် privacy ကိုမဆိုတစ်ဦးချင်းစီ၏လက်ျာလေးစားနှင့်ဒေတာများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအခြေခံမူများနှင့်ဤမူဝါဒနှင့်အတူလိုက်နာရန်ဆောင်ရွက်ရန်, ဤအချက်အလက်များ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုဝန်ခံကြောင်းလိုအပ်သည်။
ကျမတို့ကလည်းဘယ်ဥပဒေရေးရာတာဝန်နှင့်အတူလိုက်နာနိုင်ရန်အတွက်, ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ကိုစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များပြဋ္ဌာန်းရန်သို့မဟုတ်လျှောက်ထားနိုင်ရန်အတွက်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေး data တွေကိုထုတ်ဖော်သို့မဟုတ်ဝေမျှဖို့တစ်ဦးတာဝန်အောက်မှာလျှင်ငါတို့သည်လည်းတတိယပါတီများမှရန်သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များထုတ်ဖော်လိမ့်မည်။
ဤမူဝါဒအတွက်အထဲက set အဖြစ်သင့်အချက်အလက်များကိုတင်ပြခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်သောအချက်အလက်များ၏ FXCC နေဖြင့်အသုံးပြုခြင်းကိုသဘောတူသည်။ ဒီကိုရယူသုံးခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင်ကသင်ဖတ်ပြီအသိအမှတ်ပြုနေကြတယ်, နားလည်သဘောပေါက်နှင့်ဤ privacy ကိုမူဝါဒနှင့်သဘောတူသည်။ ကျနော်တို့အခြိနျမှနျမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ privacy ကိုမူဝါဒအပြောင်းလဲခွင့်ကိုကြိုတင်စာရင်းသွင်းခြင်းနှင့်အညီဤစာမျက်နှာကို update ပါလိမ့်မယ်။ အဖြစ်မကြာခဏတတ်နိုင်သမျှကျွန်မတို့ရဲ့မူဝါဒကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ - ဆိုက်၏သင့်ဆက်လက်အသုံးပြုခြင်းကိုသငျသညျမဆိုဒီလိုအပြောင်းအလဲတွေလုပ်ဖို့သဘောတူဆိုလိုပါလိမ့်မယ်။
အခြိနျမှနျမှဆိုက် may သောကြောင့်မိတ်ဖက်ကွန်ရက်များနှင့်တွဲဖက်များ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်ထံမှလင့်များဆံ့။ သင်တို့သည်ဤဝက်ဘ်ဆိုက်များမဆိုတစ်ဦး link ကိုကိုလိုက်နာပါလျှင်, ဤဝက်ဘ်ဆိုက်များမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒများရှိသည်နှင့်ဤမူဝါဒများအဘို့မဆိုတာဝန်ယူမှုသို့မဟုတ်တာဝန်ယူမှုကိုလကျမခံပါဘူးအကြောင်းမှတ်သားပါ။ သင်တို့သည်ဤဝက်ဘ်ဆိုက်များမှမဆိုပုဂ္ဂိုလ်ရေး data တွေကိုတင်သွင်းရှေ့မှာဤမူဝါဒများစစ်ဆေးပါ။
FXCC နေသမျှကာလပတ်လုံးငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကြားဆက်ဆံရေးရှိသည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေး data ကိုစောင့်ရှောက်မည်။
ဥပဒေပြုခြင်းဖြင့်ကျနော်တို့တောင်းဆိုမှုကိုအမျိုးအစားကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ဘို့အချိန်ပိုမိုလိုအပ်ပါတယ်မဟုတ်လျှင်, 30 ရက်အတွင်းမည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုတောင်းဆိုမှုများကိုတုံ့ပြန်ရန်လိုအပ်သည်။ အကြှနျုပျတို့သညျအကွောငျးကိုကိုင်ထားသည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များနှင့် ဆက်စပ်. ၌သင်တို့ကိုရရှိဖြစ်အံ့သောငှါ၎င်းအခွင့်အရေးများကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်:
သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ access ကိုရရှိကြသည်။ ဤသူသည်သင်တို့အကြှနျုပျတို့သညျအကွောငျးကိုကိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏မိတ္တူလက်ခံရရှိရန်နိုင်ပါတယ်။
အကြှနျုပျတို့သညျအကွောငျးကိုကိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏တောင်းဆိုမှုချက်ကိုပြင်ဆင်ခြင်း / ဆုံးမခြင်း။ ဤသူသည်သင်တို့အကြှနျုပျတို့သညျအကွောငျးကိုကိုင်မဆိုမပြည့်စုံသို့မဟုတ်တိဒေတာပြင်ပေးဖို့နိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အချက်အလက်များ၏မေတ္တာရပ်ခံပြောင်းလဲမှုဘို့လိုအပ်ကြောင်းမှန်ကန်ကြောင်းသက်သေပြရန်လိုအပ်သည်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်နှင့်စာရွက်စာတမ်းများကိုတောင်းခံလိမ့်မည်။
သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏တောင်းဆိုမှုဖျက်။ သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကို၎င်းကိုလုပ်ဆောင်ရန်ဆက်လက်အဘို့ကောင်းသောအရာမအကြောင်းပြချက်အရပ်၌ "မေ့လျော့ခံရဖို့" သင်၏လက်ျာဘက်, လေ့ကျင့်ခန်းကသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုဖျက်ပစ်ရန်ကျွန်တော်တို့ကိုမမေးလို့ရပါတယ်။ သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေး data တွေကိုဖျက်ပစ်ရန်ဤတောင်းဆိုမှုကိုသင့်အကောင့်နှင့် client ကိုဆက်ဆံရေးရပ်စဲ၏ပိတ်သိမ်းမှုပါလိမ့်မယ်။
ထိုကဲ့သို့သောသင်က processing ကျွန်တော်တို့ကိုမှကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များသို့မဟုတ်အရာဝတ္ထုများ၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်လျှင်အဖြစ် '' ပိတ်ပင်တားဆီးမှု 'ရန်တောင်းဆိုခြင်းသို့မဟုတ်အချို့သောအခြေအနေများတွင်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏အပြောင်းအလဲနဲ့ဖိနှိပ်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုသိုလှောင်ခြင်းမှကျွန်တော်တို့ကိုရပ်တန့်မည်မဟုတ်။ ကျမတို့ကလည်းဘယ်မေတ္တာရပ်ခံကန့်သတ်နှင့်အတူသဘောတူဖို့မဆုံးဖြတ်မတိုင်မီငါတို့သည်သင်တို့အကြောင်းကြားပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့အခြားသူများအားသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်များထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါလျှင်ဖြစ်နိုင်လျှင်, ငါတို့သည်ကန့်သတ်နှင့် ပတ်သက်. အသိပေးပါလိမ့်မယ်။ ဖြစ်နိုင်သမျှနှင့်အပျသညျဟုဆိုပါကသင်ကအဲဒီလိုလုပ်ဖို့, ကျွန်တော်တို့ကိုမမေးလျှင်သင်တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုဆက်သွယ်ပါနိုင်အောင်, ငါတို့သည်လည်းငါတို့သည်သင်တို့၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုမျှဝေသောအားဖြင့်သင်တို့ကိုပြောပြလိမ့်မယ်။
တိုက်ရိုက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်လုပ်ငန်းများ၌ခံရသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေး data ကိုကန့်ကွက်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ဤသည်မှာလည်းသလောက်ကတိုက်ရိုက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်ကိုပါဝင်သည်။ သငျသညျကိုတိုက်ရိုက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အပြောင်းအလဲနဲ့ကန့်ကွက်လျှင်, ကျွန်ုပ်တို့ထိုကဲ့သို့သောရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏အပြောင်းအလဲနဲ့ကိုရပ်တန့်ကြမည်။
object, မည်သည့်အချိန်တွင်သက်သက်သာ (profile အပါအဝင်) automated အပြောင်းအလဲနဲ့အပေါ်အခြေခံပြီးဖြစ်ကြောင်းကျနော်တို့ယူစခွေငျးငှါမညျသညျ့ဆုံးဖြတ်ချက်များရန်။ ပရိုဖိုင်းကိုငါတို့သည်သင်တို့ထံမှသို့မဟုတ်တတိယပါတီများအနေဖြင့်စုဆောင်းကြောင်းကိုသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်ပေါ်အခြေခံပြီးအလိုအလျှောက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချကူညီပေးသည်ကြောင်းနည်းပညာအသုံးပြုမှုကိုပါဝင်ပတ်သက်။
9. NO ခတှယျလိုအပ်သော
သင်သည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုဝင်ရောက်ဖို့တစ်အခကြေးငွေပေးဆောင်ဖို့ရှိသည်မည်မဟုတ် (သို့မဟုတ်အခြားအခွင့်အရေးများမဆိုလေ့ကျင့်ခန်းမှ) ။ သင့်ရဲ့တောငျးဆိုခကျြကိုရှငျးရှငျးလငျးလငျး, အခြေအမြစ်မရှိထပ်တလဲလဲသို့မဟုတ်အလွန်အကျွံလျှင်သို့သော်ကျွန်တော်တစ်ဦးကျိုးကြောင်းဆီလျော်ကြေးကောက်ခံလိမ့်မည်။ တနည်းအားဖြင့်ကျနော်တို့ကဤအခြေအနေများတွင်သင့်ရဲ့တောငျးဆိုခကျြမြားနှငျ့လိုက်လျောဖို့ငြင်းဆန်လိမ့်မည်။
ကျနော်တို့တစ်လအတွင်းအားလုံးတရားဝင်တောင်းဆိုမှုများကိုတုံ့ပြန်ရန်ကြိုးစားပါ။ သင့်ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရအထူးသဖြင့်ရှုပ်ထွေးဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်သင်တောင်းဆိုမှုများ၏နံပါတ်ရာ၌ခန့်ထားပြီလျှင်ရံဖန်ရံခါကပိုရှည်တစ်လထက်ကျွန်တော်တို့ကိုယူနိုငျသညျ။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ငါတို့သည်သင်တို့ကိုအကြောင်းကြားနှငျ့သငျ updated စောင့်ရှောက်မည်။
ကျနော်တို့ဂီယာစဉ်နှင့်ကျွန်တော်ခံယူတစ်ချိန်ကနှစ်ဦးစလုံးကိုတင်သွင်းအချက်အလက်များ၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးသေချာစေရန်ကွိုးစားကွ။ ကျနော်တို့မတော်တဆသို့မဟုတ်ဥပဒေနှင့်မညီညွတ်သောအဗဒ္ဒုန်, မတော်တဆဆုံးရှုံးမှု, ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲအပြောင်းအလဲတချို့, ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲထုတ်ဖော်သို့မဟုတ် access ကို, အလွဲသုံးစားလုပ်, ငါတို့အပိုင်အတွက်ကိုယ်ပိုင်ဒေတာများရဲ့အပြောင်းအလဲနဲ့အခြားသောဥပဒေမဲ့ပုံစံဆန့်ကျင်ကိုယ်ပိုင်ဒေတာများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့သင့်လျော်တဲ့, အုပ်ချုပ်ရေးနည်းပညာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကာအကွယ်ထိန်းသိမ်းရန်။ ဒါကဥပမာ, firewalls များ, စကားဝှက်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်အခြားလက်လှမ်းနှင့်စစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အထားပြသခြင်းထိန်းချုပ်မှုတို့ပါဝင်သည်။
သို့သော်အင်တာနက်ကိုကျော်ထုတ်လွှင့်ခြင်းသို့မဟုတ်အီလက်ထရောနစ်သိုလှောင်မှုနည်းလမ်းမရှိနည်းလမ်း, 100% လုံခြုံဖြစ်ပါတယ်။ အကြှနျုပျတို့သညျအကြှနျုပျတို့အားထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်သင်ကသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အန္တရာယ်မှာအဲဒီလိုမဆိုသတင်းအချက်အလက်လုံခြုံရေးသေချာစေရန်သို့မဟုတ်ခိုင်လုံလို့မရပါဘူး။ ငါတို့သည်လည်းထိုကဲ့သို့သောအချက်အလက်များကိုဝင်ရောက်ထုတ်ဖော်, ပြောင်းလဲ, ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ, ဒါမှမဟုတ်စီမံခန့်ခွဲမှုအကာအကွယ်မဆိုချိုးဖောက်ဖျက်ဆီးမရစေခြင်းငှါအာမခံလို့မရပါဘူး။ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဒေတာများခိုးယူထားသည်ဟုယုံကြည်ပါက, ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
FXCC မေးမြန်းချက်ဖြေကြားသို့မဟုတ်ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရန်, တိုးတက်လာသောနှင့်အသစ်န်ဆောင်မှုများကိုမဆိုတရားဝင်အချက်အလက်များကို retention ကိုလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့နိုင်ရန်အတွက်ကိုးကားသည်၎င်း၏ databases ကိုအတွက်သင့်အချက်အလက်များကိုသိုလှောင်သိမ်းဆည်းလိမ့်မည်။ ဤသည်ကိုသင်ဆိုက်ကိုသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်ငါတို့နှင့်အတူအပြန်အလှန်သုံးပြီးရပ်တန့်ပြီးနောက်ငါတို့သည်သင်တို့၏သတင်းအချက်အလက်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်စခွေငျးငှါကိုဆိုလိုသည်။
ကွတ်ကီးသင်မှ လာ. ရှိရာက်ဘ်ဆိုက်မှပြန်လာသည့်အခါ, သင်က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်ပါပြီဘယ်မှာသင်အသုံးပြုနေသော browser ကိုနဲ့ settings တွေကိုအမျိုးအစား, ဆုံးဖြတ်ရန်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီရန်သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာသိမ်းဆည်းထားစာသားသေးငယ်တဲ့အပိုငျးပိုငျးဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သင့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုသေချာစေရန်ဖြစ်ပါသည် secure ။ ဤအချက်အလက်များ၏ရည်ရွယ်ချက်သည်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုသို့မဟုတ်ဦးစားပေးအရသိရသည် web စာမျက်နှာများတွင်တင်ဆက်ထားပါတယ်အပါအဝင် FXCC site ပေါ်တွင်တစ်ဦးထက်ပိုသက်ဆိုင်ရာများနှင့်ထိရောက်သောအတွေ့အကြုံ, အတူသင်တို့သည်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
FXCC ကိုလည်းက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ယာဉ်အသွားအလာနှင့်အသုံးပြုမှုကိုခြေရာခံဖို့လွတ်လပ်သောပြင်ပဝန်ဆောင်မှုပေးသုံးနိုင်ပါသည်။ ကွတ်ကီးမကြာခဏအင်တာနက်အပေါ်အများအပြားကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာအသုံးပြုကြသည်နှင့်သင်လျှင်သင်ရွေးချယ်နိုင်သည်နှင့် cookie ကိုသင့် browser ၌သင်တို့၏ဦးစားပေးနဲ့ options ပြောင်းလဲနေတဲ့ကလက်ခံကြလိမ့်မည်ကိုဘယ်လို။ သင်တို့တွင်အချို့သောအစိတ်အပိုင်းများကိုရယူနိုင်တော့မည်မပြုစေခြင်းငှါ www.fxcc.com သငျသညျ, သင့် browser မှာ cookie ကိုလက်ခံမှုကို disable လုပ်ဖို့က်ဘ်ဆိုက်၏အထူးသဖြင့်လုံခြုံအစိတ်အပိုင်းများကိုရွေးချယ်ပါ။ ထိုကြောင့်ငါတို့သည်သင်က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာရှိသမျှန်ဆောင်မှုအနေဖြင့်အကျိုးခံစားရဖို့ cookie ကိုလက်ခံမှုကို enable အကြံပြုပါသည်။
သင်သည်သင်၏ web browser ကို cookies များကိုလက်ခံရန်သို့မဟုတ်ငြင်းဆန်ရန်ထိန်းချုပ် setting သို့မဟုတ်ပြင်ဆင်ရေးအားဖြင့် cookies များကိုလက်ခံရန်သို့မဟုတ်ငြင်းပယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ သငျသညျ cookies တွေကိုငြင်းပယ်ဖို့ရွေးချယ်ထားလျှင်ကျနော်တို့ရဲ့က်ဘ်ဆိုက်အချို့ကိုလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့်ဒေသများရန်သင့်သုံးစွဲနိုင်ကန့်သတ်ခံရနိုငျသျောလညျး, သငျသညျနေဆဲကြှနျုပျတို့၏ website သုံးနိုင်ပါသည်။ သင်သည်သင်၏ web browser ကိုထိန်းချုပ်မှုမှတဆင့် cookies တွေကိုငြင်းဆန်နိုင်သည့်အားဖြင့်နည်းလမ်းကနေ Browser-To-browser ကိုကွဲပြားသကဲ့သို့ပင်, သင်ပိုမိုသတင်းအချက်အလက်အဘို့သင့်ကို browser ရဲ့အကူအညီနဲ့ menu ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုသင့်ပါတယ်။
သင်သည်သင်၏ဝဘ်ဘရောက်ဆာ၏ cookie ကို setting များကိုပြောင်းလဲနေစရာမလိုဘဲဒီ website ကိုသုံးစွဲဖို့ဆက်လက်လျှင်သင်တို့သည်ငါတို့၏ cookie ကိုမူဝါဒဖှနေကြတယ်
cookies တွေကိုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်နှင့်သင့် browser ကို / device ကိုမှတဆင့်သူတို့ကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့ဘယ်လိုသွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး www.aboutcookies.org
သင်တို့သည်ငါတို့၏ privacy ကိုမူဝါဒအကိုရည်မှတ်မဆိုမေးမြန်းချက်သို့မဟုတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်လိုလျှင်, e-mail,, စာတိုက်လိပ်စာ, ဖုန်းနှင့်ဖက်စ်များမှတဆင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါသို့မဟုတ်ဖောက်သည်တစ်ဦးဝန်ဆောင်မှုကိုယ်စားလှယ် IM, ငါတို့၏ချက်တင်စက်ရုံသုံးစွဲဖို့အခမဲ့ခံစားရပါ။
ဥပဒေအပေါင်းအဖေါ်များအိမ်, Kumul အဝေးပြေး,
ဆိပ်ကမ်း Vila, ဗာနူအာ
E-mail ကို: info@fxcc.net